Ubaphethe ngeyangonyaka odlule uMpungose – Maskandi Media
Ubaphethe ngeyangonyaka odlule uMpungose
Inhlinini yoxolo isabadida namanje Kuyamangaza ukubona ingoma noma icwecwe elakhishwa ngonyaka ophelile lisadla ubhedu namanje. UKhuzani umfoka Mpungose akakhiphanga
ngamaholidi ephasika ngesimo sokuthi akasitholanga isikhathi sokungena estudio ngenxa yokuba matasa nokugcwalisa iMoses Mabhida.
Kwaba buhlungu kubathandi bomculo wakhe kanye nasezimbangini imbaa ngoba lokho kwaphazamisa ukudayisa kwazo.
Bekulindeleke ukuthi indaba yakhe izophupha unyaka wonke ngoba seziyaziwa futhi zijwayelekile izingoma zakhe kwazise sezinesikhathi zikhona. Kumangazile ukuthola ukuthi uyena mculi kodwa endimeni yomculo kaMaskandi oqashwa kakhulu.
Sikhuluma nje uyena yedwa umculi iNingizimu Africa yonke ngoba ingaka nje owakwazi ukubizwa azodlala live kuma Awards e-PSL. Waqopha umlando owawungabhekwe muntu wakzise akukaze kwenzeke ukuthi umculi kMaskandi abizwe kuloya mcimbi.
“Nami ngangingakholwa futhi ngangingabhekile ukuthi ngingake ngibizwe entweni enkulu kangaka. Akumngani wamuntu ukukhethwa phakathi kwabaculi abangaka ezwenikazi laseMzansi ne-Africa ukuthi kube uwena oyosukumisa isikhulu sale nhlangano enkulukazi yebhola lezinyawo”.
“Okwethuke vele akuvamanga ukunakwa nakangako kule ndima yomculo ngoba usakhula lo mculo usabukelwa phansi. Kwangithokozisa kakhulu ukuthola ithuba elifana naleliyana kwazise nami ngisengumfana osakhulayo. Ngisabonga namanje ezikhulwini zonke zale nhlangano ngithi isandla seqa ikhanda ngoba lokhu abakwenza kwenza
umculo wethu uthole ukuhlonipheka uphinde waziwe endimeni yomculo wonkana. Ngisazoqhubekake ngithi Izwe elikaKhub, ngiphinde ngithi inhlinini yoxolo sesikhathele ukuyikhuluma kuze kufike isikhathi lapho ngibuyela khona estudio ngiqede nendlala engizwa kukhalwa ngayo ngoba ewu ziningi izinyembezi”. Kubeka uKhuzani.
Previous Previous post: Ligijima kukhale abafana Igeza
Next Next post: Mabili Amaxoki othandweni